Carpuride dia mitondra Android Auto sy CarPlay amin'ny fiaranao taloha | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 22/06/2022 17:00 | Gadgets, General, hevitra
Ny fiara amin'izao fotoana izao dia feno ecran sy fifandraisana amin'ny lafiny efatra, na izany aza, dimy taona lasa izay dia tsy dia mahazatra loatra izany, kely ny écran ary fanampiny izay tsy ny rehetra no vonona ny handoa raha toa ka nandinika ny asany.
Na izany aza, ny fiara dia singa maharitra mandritra ny taona maro, izay nahatonga ireo izay tsy manana fifandraisana na efijery lehibe ho lany andro tampoka. Mamaha ny olana mifandray amin'ny fiaranao miaraka amin'i Carpuride, izay mitondra Android Auto sy CarPlay mora foana.
2 Fametrahana amin'ny fiaranao manokana
Ity fitaovana ity amin'ny ankapobeny dia takelaka, araka ny azonao eritreretina, dia ampifanarahana amin'ny fomba mora indrindra amin'ny foto-kevitry ny takelaka izay azontsika ampidirina ao anaty fiara. SYAmin'ny ankapobeny, ny takelaka dia vita amin'ny plastika ary misy eo anoloana misy ny efijery 7-inch. Ny lafiny dia ho an'ny fifandraisana isan-karazany toy ny AUX, karatra microSD ary AV. Toy izany koa, manana seranan-tsambo AC nentim-paharazana izahay mba hanomezana hery, izay toa ahy ny teboka ratsy voalohany, dia toa mety kokoa ny mampiasa seranan-tsambo USB-C izay ahafahantsika manararaotra ny fifandraisan'ny fiara. .
2V mankany amin'ny Type M tariby hanamafisana ny Carpuride
sandry misy kaopy fisotro
Cable AUX male-lehilahy
Tady adhesive roa sosona
Izy io dia manana USB hamerenana
Ny fitaovana dia misy karazana fanohanana roa, fototra ho an'ny endrik'ilay dashboard ary sandry iray hametrahana ny Carpuride eo amin'ny fitaratra. Raha ny tena manokana, ny safidy mahomby indrindra sy mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana dia ny manaraka ny Carpuride mankany amin'ny dashboard fiara. Noho izany, ny fonosana dia tena tsotra ary tsy misy fihatsarambelatsihy, farafaharatsiny dia manamarika fa misy sarimihetsika fiarovana eo amin'ny efijery.
Azonao atao ny mividy izany amin'ny vidiny tsara indrindra toy ny mahazatra amin'ny Amazon, aza adino ity fotoana ity.
Fametrahana amin'ny fiaranao manokana
Ny fametrahana dia tena tsotra, ary izany angamba no iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ity vokatra ity, ny zava-misy fa tsy mitaky karazana fametrahana izay manova ny dashboard ny fiarantsika, ary noho izany dia afaka mametraka izany amin'ny fomba roa isika: Na amin'ny fampiasana ny sandry teleskopika misy kaopy suction izay noresahinay teo aloha, na amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny dashboard, izany hoe, Araka ny nolazaiko teo aloha, ny safidy izay toa ahy no idealy.
Efijery 7″ miaraka amin'ny vahaolana FullHD
Efijery mikasika capacitive
Mirror Link miaraka amin'ny fitaovana samihafa
Apple CarPlay sy Android Auto
Hampiasa ny kasety roa sosona fotsiny isika ary hametraka ny takelaka eo amin'ny fotony. Tonga izao ny teboka ratsy, tsy maintsy mibodo trano fivoahana sigara isika mba hanamafisana ny fitaovana. Ity adaptatera herinaratra ity dia tsy dia kely loatra, ka haka toerana be dia be, dia tsara ny mitady safidy hafa. Na izany aza, ity no tariby voalohany sy farany tokony haka toerana ao anaty fiarantsika noho ny Carpuride.
Safidy iray hafa mahaliana, raha manana fahaiza-manao sy faniriana hanao izany ianao, dia ny manala ny faran'ny faladia sigara ary mametaka ny tariby amin'ny socket avy ao anatiny mba hialana amin'ny tariby "amin'ny alàlan'ny", na izany aza, izany dia efa manala ny ankamaroan'ny. fahasoavana ho an'ny fitaovana, izany hoe, tsy ampy fametrahana.
Ankoatra izany, ny fanohanana dashboard ihany koa dia manana entona kely, izany hoe, dia ho afaka mitsangana hanitsy ny zoro mba hanitsy tsara kokoa ny filantsika, zavatra tena manan-danja raha jerena ny karazana fitaovana, satria ny fiarovana ny fiara no zava-dehibe indrindra.
Amin'ity tranga ity dia nanao ny fitsapana miaraka amin'ny Apple CarPlay izahay, na dia eo aza ny zava-misy fa ny fitaovana dia manana ny Operating System. Na dia marina aza fa tsy maintsy atao amin'ny teny anglisy ny fanamafisam-peo voalohany, dia afaka miditra ao amin'ny firafitry ny rafitra hanovana ny fiteny amin'ny teny espaniola isika. izay handikana tanteraka ny zava-drehetra. Na izany aza, azoko fa ny tanjona lehibe indrindra dia ny fahafahana mampiasa Android Auto sy Apple CarPlay, izay azontsika atao mora sy tsy misy finday tanteraka.
Ho azonay antoka fotsiny fa manana Bluetooth sy WiFi amin'ny iPhone mifandray izahay, Handeha any amin'ny fikandrana Carpuride izahay ary hampavitrika ny fahitana Bluetooth. Rehefa vita izany dia hifandray fotsiny amin'ny Bluetooth an'ilay fitaovana isika ary ny iPhone (na Android) dia hitarika antsika ho azy hampiasa ny kinova fiara amin'ny rafitra fiasan-dry zareo. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika miditra Apple CarPlay miasa tanteraka ary tsy misy fomba hanavahana azy amin'ny Apple CarPlay an'ny fiara hafa.
Fotoana izao hifidianana ny famoahana feo, satria na dia manana mpandahateny manokana aza ny Carpuride, dia manoro hevitra aho ny hampiasa ny iray amin'ireo lalan'ny fifandraisana telo hafa:
Mampiasa ny audio out ny fitaovana sy ny fampidirana fanampiny amin'ny fiaranao, amin'ny fampiasana ny tariby Jack to Jack izay tafiditra ao anaty boaty
Mampiasa ny Mpampita FM Ny fitaovana
Mampiasa ny Bluetooth
Manoro izany aho raha ny kalitao sy ny fahamarinan-toerana no tadiavinay dia ny fampidirana fanampiny no ampiasainay sao dia manana an'io ary mazava ho azy fa tsy manelingelina antsika ny cable vaovao. Na izany aza, ny sisa amin'ireo safidy hafa dia mitovy miasa.
Navigation amin'ny alalan'ny menus dia tena malama, ary haingana, ary koa ny hafainganam-pandeha. Misy fahatarana ihany rehefa mampiasa CarPlay tsy misy tariby ary manomboka mozika na podcast playback. Ity fahatarana ity dia misy ihany koa ao amin'ny CarPlay ofisialy efa napetraka avy amin'ny orinasa, ary zavatra manokana amin'ny rafitra tsy misy tariby, tsy olana amin'ny CarPuride.
Ny dikan-teny nodinihinay dia azo alaina amin'ny vidiny tena mifaninana amin'ny 219,99 euros, amin'ny toerana fivarotana mahazatra toy ny Amazon ary izany dia manome antsika fiarovana sy antoka betsaka. Ankoatr'izay, manana fihenam-bidy fanampiny izy ireo mandritra ny fotoana fohy amin'ny € 20 amin'ny fampiharana ny tapakila tamin'ny fankalazana ity reveiw ity. koa, Izahay dia manana safidy haka dikan-teny izay hanana fakantsary aoriana ary afaka manampy anay amin'ny fiantsonan'ny fiara, na dia mandreraka kokoa aza ny fametrahana izany.
Navoaka tamin'ny: 22 junio 2022
Fanovana farany: 19 junio 2022
Configuration sy fametrahana
Ny seranan-tsambo dia AC
tsy dia voadika tsara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Carpuride dia mitondra Android Auto sy CarPlay amin'ny fiaranao taloha
Dreame D10 Plus, mpanadio banga manafoana tena tanteraka [Fandinihana]